Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Igodo Ọhụrụ ọgwụ mgbochi ọrịa shuga
Daewoong Pharmaceutical (Daewoong) ekwenyela na nsonaazụ topline nke 3 na-ekwe nkwa na-elekwasị anya na nsonaazụ ọgwụgwọ dị ka Enavogliflozin monotherapy yana ngwakọta ọgwụgwọ yana metformin. Daewoong's Enavogliflozin bụ ihe mgbochi SGLT-2 na mmepe maka oge mbụ na Korea. Akụkọ topline na-adịbeghị anya na-eme ka a na-atụ anya ya nke ọma maka nsonaazụ ịga nke ọma nke usoro 3 nke ụlọ ọgwụ nke a ga-ewepụta akụkọ ikpeazụ na ọkara nke abụọ nke afọ a.
Prọfesọ Kyong Soo Park nke Hospitallọ Ọgwụ Mahadum Mba Seoul dị ka onye nyocha na-ahazi na ndị isi nyocha sitere na ụlọ ọrụ iri abụọ na abụọ esonyela na nnwale ụlọ ọgwụ nke 22 maka Enavogliflozin dị ka monotherapy (ENHANCE-A ọmụmụ). Emere ọmụmụ ihe ahụ dị ka multicenter, randomized, okpukpu abụọ kpuru, placebo-achịkwa, na ọgwụgwọ nkwenye nke nwere ndị ọrịa 3 nwere ụdị ọrịa shuga 160. Isi njedebe bụ ịchọpụta ọdịiche dị n'etiti otu Enavogliflozin na otu placebo na mgbanwe ntọala nke haemoglobin glycated (HbA2c). Dị ka akụkọ topline si kwuo, a na-ahụta na mbụ ka ọ bụrụ 1% p na izu 0.99 kemgbe nchịkwa nke ngwaahịa nyocha, nke kwadoro mkpa ndekọ ọnụ ọgụgụ (P-uru <24). HbA0.001c, nke bụ ngwaahịa ikpeazụ nke hemoglobin jikọtara ya na glucose ọbara, bụ ihe atụ ọla edo iji chọpụta ogo ọrịa shuga.
Na mgbakwunye, enwere nsonaazụ ọmụmụ dị mma nke achọpụtara na usoro ọzọ 3 nnwale ụlọ ọgwụ nke ngwakọta ọgwụgwọ Enavogliflozin na metformin site na Daewoong Pharmaceutical (ENHANCE-M). Ọ bụ Prọfesọ Gun Ho Yoon nke Mahadum Katọlik nke Korea Seoul St. Mary's Hospital na-eduzi ọmụmụ ihe ENHANCE-M dị ka onye nhazi nyocha na ndị isi nyocha sitere na ụlọ ọrụ 23. Emere nnwale ahụ na ndị ọrịa 200 nwere ụdị ọrịa shuga 2 ndị na-enwechaghị njikwa glucose ọbara na metformin. Dabere na nsonaazụ gbasara mgbanwe mmalite nke HbA1c. Otu ndị ọrịa ejiri otu oge Enavogliflozin na Metformin egosipụtara nke ọma na ha adịghị ala n'otu ahụ nke enyere Dapagliflozin na metformin otu oge. Ekwenyere nsonaazụ nchekwa na otu a na-enye Enavogliflozin n'ihi na enweghị ihe ọjọọ na-atụghị anya ya ma ọ bụ mmeghachi omume ọjọọ mere.
Ndị ọrụ nyocha ahụ kwuru, "Nnwale ụlọ ọgwụ nke 3 maka Enavogliflozin monotherapy (ENHANCE-A) na Metformin Nchikota ọgwụgwọ (ENHANCE-M) yana mkpokọta 360 ndị sonyere na Korea egosila mmetụta mbelata glucose na nchekwa ọgwụ. Enavogliflozin ga-abụ nhọrọ ọgwụgwọ dị mma maka ndị ọrịa nwere ụdị ọrịa shuga 2 ma ọ bụrụ na enwetara otu nsonaazụ ahụ site na usoro ọgwụgwọ ngwakọta ndị ọzọ.
Dị ka enwetara nsonaazụ dị ịrịba ama site na nnwale abụọ ahụ maka monotherapy na ọgwụgwọ ngwakọta Metformin, Daewoong nwere obi ụtọ iwepụta ihe mgbochi SGLT-2 ọhụrụ na nke mbụ na South Korea. Daewoong na-ezube ozugbo itinye akwụkwọ maka nkwado ọgwụ ọhụrụ na ịmalite ọ bụghị naanị Enavogliflozin na mana Enavogliflozin / Metformin na-edozi ọgwụ-nchịkọta ọnụ (FDC) site na 2023. FDC nke Enavogliflozin na Metformin na Jenụwarị 1.
Sengho Jeon, Daewoong Pharmaceutical CEO kwuru, "Site na ịga nke ọma nke ule ụlọ ọgwụ na nso nso a, a na-atụ anya ịnye ndị ọrịa mpaghara ahụ ọgwụ ọhụrụ kacha mma na klas maka ọrịa shuga n'oge dị nso." "Anyị ga-agba mbọ ịhapụ ọgwụ na-abịa n'ọgbọ ma nyere ndị na-arịa ọrịa shuga na nsogbu aka, ebe anyị na-enweta ike na-eto eto nke ụlọ ọrụ ahụ."
Finnair Wet na-akwụ ụgwọ A320 site na DAT maka ndị na-arụsi ọrụ ike.